Yaada nafii hin qabne, homishaawaa hin taane ofiitt qabannee furmaata qofaan walitt haa baanuu
Yaada nafii hin qabne, homishaawaa hin taane ofiitt qabannee furmaata qofaan walitt haa baanuu: Ummata Oromoo hangam gargar facaasuuf dinni irratt hojjetuyyuu qabsoo saan irra haanee tokkumaa saa mirkaneeffatee jira. Garuu isa hogganuuf kanneen dorgommee seenan waan adda isaan fageessu malee qabattee isaan tokkeessu irratt walitt dhufani mari’achuuf wanti hin beekamne isaan danqaa akka jiru ni hubatama. Hammeenya diinaa caalaa mudaa walii saxiluutt yeroo ballessu.
Hanqina keenya durii hanga tokko qabsoon irra haanaa as geenye. Haatahu malee gara caalu hamaan Oromoo ammas Oromoo tahuun ni mullata. Oromummaan ammayyuu ofittummaa, ayyaanlaallattummaa fi adda addummaa qabnu toko toko irra haanuu hin dandeenye. Waldaguu, wal nyaachuu wal salphisuu, wal tuffachuu dhaabotii fi abba abbaan hojii guyyuu taasifatan jiru. Kun akeeka ittiin masakaman mamaan guutamuu irraa maddaa.
ABOn, kakuu bittaa kolonummaa jalaa bahuu, bilisummaa fi walabummaa, saba Oromoo fi dargaggoo saa gidduutt seename.
ABOn, kakuu bittaa kolonummaa jalaa bahuu, bilisummaa fi walabummaa, saba Oromoo fi dargaggoo saa gidduutt seename. Sanatu Kaayyoo sabichaa tahe. Yaayyoon karaa, ABOn eegalaa yayyabee Oromummaa qaata yabboo addunyaatt baasee fi hanga yoonaa karaa Oromiyaa birmaduu fi walba agarsiisuu irratt nakkarii hin qabne. Yaayyoo karaa akeeka demokraataawaa Gadaa walqixxummaa, birmadummaa, of irratt hirkannaa fi obbolummaa ilmaan namaa hundaa heduu irratt hundaawe. Kanaafi bakka inni hin jirrettillee, nyaaphi yaaduma saan kan rifata jiran, Oromiyaan gonka lamuu fedha Oromiyootaa malee bulchuun akka hin dandahane hubachuunii. Bakka dadhabaa tahee jirutillee, ABOn akka Ayyaana Oromoott jabaa ture. ABOn dhugaa, dhaaba fedhaan qooda fudhattootaa, kan saala, sanyi, amantee, qomoo, fi bakka dhalootaa utu hin tahin dandeettii qofaaf ija qabu waan taheef kan sana himatu hundi sadarkaa Kaayyoo olhaanaa sanat of eegaatu abdatama.
Bara namoota qaamaan jaarraa 21faa keessa tahanuu sammuun jaarraa kudha sagalaffaa keessa jiraniin walitt dhufne.
Obbo Ibsaa Guutamaa tiin
Barrisaa bara ofuu amanuun rakkisaa tahe bara namoota qaamaan jaarraa 21faa keessa tahanuu sammuun jaarraa kudha sagalaffaa keessa jiraniin walitt dhufne. Akka cunqursaa fi cunqurfamaatt jiraataa turree; isaan afaan qawween yoo yaadan nuti sodaan liqimsamnee jiraanne. Amma nu lachanuu surrii keenyatt walqixxee dhimma bahuu dandeenya. Hoggansummaa shaakaluu dhowwamuun keenya hala amma jirru keessatt calaqisaa jira. Ummati Oromoo ummata hogganoota ofii caalaa ofbara malbulchaa horate. Dhaabota Oromoo keessa warraaqxummaan waakkii waan taheeef ummatichaaf hoggansa yeroon gaafatu kennamaa hin jiru. Daddaaqotaa fi ayyaanlaaallatootatu heddummaata. Hoggansa keessatt ofittumaa ijaa hin qabnetu mullata. Kan gara malee of jaallatu waan halle daawitii sana qofaa itt agarsiisun ilala. Ilaalcha sana jabeeffachuufis bara teknooloojy keessa jiru dhiisee hariiroo hawaasaa duubatt hafaa tahett iyyachuu hin qaana’u. Kanaaf duubatt malee fulduratt deemuun danqamaa jira.
Akeeki qabsichaa Oromiyaa kolonummaa jalaa baasanii republika demokraatoftuu ummataa gad dhaabuu dha.
Waanjoo ykn QambarriiObbo Ibsaa Guutamaa
Gidiraa fi cinqii waggoota 150 keessaa waggooti shantamman darban yeroo qabsoo tokkummaa Oromoo, hunda hammataa tahe kallachummaa ABOn bobbaafamuu itt dandahame. Akeeki qabsichaa Oromiyaa kolonummaa jalaa baasanii republika demokraatoftuu ummataa gad dhaabuu dha. Nannaama sana Habashootis qabsoo Tigrawaay moo’atanii bahan angoo keessaa dhuunfachuu gaggeeffataa turan. TPLF/EPRDF Oromiyaa tokkoomte, sirna federaalaa, hojii fi barumsaaf afaan ofiitt dhimma bahuu fi Finfinnee irraa fedha Oromoo hanga sonni biraa tolfamutt eeguu waan walii galeef ABOn waliin hiriiruu dandahe. Haaloti kun kan TPLFiin fudhataman Oromoo nageessee caccabina empayerichaa oolchuf malee akka ABOn mootummaa cehumsaa keessatt haa tahu isaan achitt dorgomaa tahuuf miti. Tokko toko waligaltich akka hin waarre waan mamaniif kan harka jiru hamma dandahame xumuruuf shaffisaa turanii. Kanneen keessaa tokko imaammati barumsaa waggaa itt haanuuf hojii irra akka oolu qopheessuun dandahamee ture. Akkuma se’ame hidhatichi hin banka’ee. Qooda fudhannaa ABO fi offalcha Oromoo malee heerri haaraan ni tumame.
Kora Finfinnee bara 1976 booda korri ABO guddichi Soodareetti geggeeffamaa jira
Tokkummaa ilaachisee Ibsa ABO irraa kenname
Qabsoo bara dheeraa roga hundaan uummatni Oromoo taasisaa turee yeroo ammaa firiin isaa muldhachuu jalqabee jira. Qabsoo roga hundaan taasifamaa tureen ilmaan Oromoo qaqaaliin aarsaa guddaa kaffalanii jiru. Qabsa’otni muratoon dukkana keessa taa’anii ifa argan, dhalootni haarawaan akka ifa keessa taa’ee mirga isaaf falmatuuf injifannoo nu goonfachiisaniiru. Aarsaan isaan Oromoof kaffalan qabsoo Oromoo gulantaa olaanaatti ol kaasee jira.
Qabsoon Oromoo bifa ijaaramee fi hin ijaaramiin gaggeefamaa ture. Gulantaan qabsoo Oromoo ammuma danboobaa dhufeen, bifa ammayyaa’ee fi jaarmiyaa qabsoo Oromoo hoogganu goonfate. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti jaarmiyaalee siyaasaa qabsoo Oromoo hoogganan keessaa ABOn isa angafa. ABOn dhaloota har’aa qaruu irraa kaasee, sabboonummaa ilmaan Oromoo sadarkaa duubatti hin deebineen geessisee jira. Kun qabsoo jajjabaa ABOn geggeesseen, injifannoo dhaloota haarawaa goonfachiise dha. Haa ta’u malee akkuma injifannoo roga hedduun goonfanne, hanqinootas qabaachaa turre. Hanqina qabsoo keessatti nama mudate qabsoon sirreeffatu. ABOnis hanqinoota isa mudataa ture akkuma qabsoon sirreefachaa dhufe har’as of sirreessaa jira.
Caffeen kan ummata Oromoo malee kan gola tokko miti. Golli kan fedhe luqqisee kan fedhe itt suuquuf aangoo hin qabu.
Aarii keenya boriif haa bulfannu: Sirni federalaa Oromiyaa ofiin of bulchuu dandeessisa jedhameetu fudhatama. Qabsaawota Tigraayiin kan waldhaban aangoo itt gaddhiisuu diduu dha. Oromiyaa keessatt mo’ummaan kan ummataat jedhameef malee tasgabbiin hardha jiru hin argamu ture. Bulchi Oromiyaa, Oromiyaa keessatt aangoo hojii gaggeessu olhaanaa dha jedhamee yaadama.
Caffeen Oromiyaa bulcha kana keessatt ol haanaa dha. Miseensoti saa bakka bu’oota ummaticha waan tahaniif buqa’uu saanis ummati irratt walii galuu qaba. Muudammis buqa’is gidduu kana tahe seerummaan saa ciicannoo kaasee jira. ADWUIn isa eegalaa utuu hin tahin amma isa jijjiiramee akeeka demokraasiin yeroo cehumsaa kana gaggeessuutt amanama. Kanaaf, miirri durii kulkulfachuu hin qabu.
Oromo never desired others land passing over their own country.
Ibsaa Guutamaa one of the OLF founders, Former Education Minister, Prisoner of conscience and AuthorIbsaa Guutamaa
Oromia must repatriate Wallo back to Oromia.
"Oromia must repatriate Wallo back to Oromia. Wallo was recognised as an integral part of Oromia during the 1991 Transitional Arrangement/Charter. Justice for Walloo!"
OROMO CONSENSUS: UNITY MAKES STRENGTH: By Leenjiso Horo*
Walloo OromoLet me begin with the oftentimes told old parable to illustrate the meaning of the Oromo consensus: unity makes strength. The parable runs like this. Once upon a time, there was an old man who was very ill and lay dying in his bed. He had four children who were always fighting among themselves. All were always hostile to each other, always in conflict with each other. The old man always worried about them. He wanted to teach them a lesson. One day, he asked all of them to come to him. When they came, the old man gave them a bundle of sticks and asked them, "can you break these sticks?" First, the first son tried to break it. He tried very hard and he couldn't. Finally he gave up. Then, it was the second son’s turn. He too tried, and tried very hard and failed to break. He too gave up. Then, the third son and the last son tried in turn one after the another. All tried, and all could not break the bundle of sticks. Then, he gave one stick at a time to each of them and asked them again "can you break it?" Each of them broke it.
Karaa Lama: Tokko qajeelaa kuun boolla!
Jawar Mohammed is journalist and activist and CEO of Oromia Media NetworkHaala amma irra geenyeen siyaasaan Oromoo fi biyya sanii karaa dhanquu irratti deebitee jirti. Karaan tokko, kan amma qabanne kan wal loluu kun boollatti nu geessa. Karaan ji'oota muraasa dura ture, kan walhubachuufi tokkummaa sun ifatti nu baasa. Kan qajeelaa irraa haa kaanu.
ABOn akkuma waliigaltee mootummaa waliin godheefi waadaa ummataa seenetti siyaasaa lolaa dhiisee kan nagayaa geggeessutti yoo deebi'e; jechuunis WBOn bosonaa bahee humna nageenya Oromiyaatti yoo makame.
Mootummaanis akkuma waliigalteefi amaanaa ummataa bakkaan gahuuf waadaa seene humna waraanaa kana barbadeessuu yaalurra ofitti fudhatee leenjisee humna nageenyaattii yoo make.